ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာကတည်းက မိခင်ကြီးနဲ့အတူ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းကို ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနေတဲ့ အစ္စဏီရဲ့ အကြောင်း.. – CELE WINGAGAR
July 13, 2021 100million Articles 0
အစ္စဏီက အဆိုတော်ကောင်းတစ်ယောက်ပါ။ယခင်ကနေခုချိန်ထိ သူရဲ့သီချင်းတွေကကျော်ကြားနေဆဲဖစ်ပါတယ်။သူရဲ့အမှားတစ်ခုကြောင့်ထောင်ကြခဲ့ပါတယ်။လတ်တလောလေးကမှ ထောင်ကလွတ်လာတာပါအခုဆိုသူကဘဝကိုအကောင်းဆုံဖြတ်သန်းနေပါပြီ။သူအထဲမှာနေခဲ့ရတုန်းက သူ့မိခင်မှာအမြဲနာကျင်ဝမ်းနည်းနေခဲ့ရတာပါ။
ခုဆိုသူက မိခင်နဲ့အတူအလုပ်ဝေဝိုင်းကူလုပ်ရင်းဘဝကိုဖြတ်သန်းနေပါတယ်။သူက အလှူအတန်းတွေမှာလဲရက်ရောတဲ့စိတ်ရှိကြောင်း Mideaတစ်မှာ “အမှားတစ်ခုလုပ်မိလို့ခုလိုဖြစ်ရပေမယ့် လူထဲကလူပါပဲ အလှူအတန်းတွေလဲတတ်နိုင်သလောက်လုပ်သွားချင်တာပေါ့”ဆိုပြီးပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်
အစ္စဏီကအခုသားအမိနှစ်ယောက်စီးပွားရေးကိုစတင်လုပ်ကိုင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလဲ ရှင်းပြထားပါသေးတယ်။ “ကျွန်တော်အမေ က ဟင်းချက် အရမ်းကောင်းတယ် အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ သားအမိ ၂ယောက် စီးပွားရေး လုပ်မှာ ဖြစ်တော့ မှာမို့လို့ မေကြီးလက်ရာ ဆိုပြီး စီးပွားရေး တစ်ခု ကိုစလုပ်ခဲ့တာပါ
ကျွန်တော် အထဲ မှာတုန်းက အမေ ရဲ့ ဟင်းချက်လက်ရာ ကို အရမ်းလွမ်းတယ်. အမေ ဟင်းချ က် ပို့တဲ့နေ့ဆို ပို့တဲ့ဟင်းတွေကိုတစ်နေ့တည်း ကုန်အောင်စားပစ်တာမျိူးရှိတယ်ပရိသတ်တွေက မေကြီးလက်ရာ ကို အားပေးချင်တယ်ဆိုရင် မေကြီးလက်ရာ fb မှာ အားပေးနိုင်ပါတယ်”ဆိုတဲ့သတင်းကိုမျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။
ပွနျလညျလှတျမွောကျလာကတညျးက မိခငျကွီးနဲ့အတူ စားသောကျကုနျလုပျငနျးကို ကူညီလုပျကိုငျပေးနတေဲ့ အစ်စဏီရဲ့ အကွောငျး..
အစ်စဏီက အဆိုတျောကောငျးတဈယောကျပါ။ယခငျကနခေုခြိနျထိ သူရဲ့သီခငျြးတှကေကြျောကွားနဆေဲဖ ဈပါတယျ။သူရဲ့အမှားတဈခုကွောငျ့ထောငျကွခဲ့ပါတယျ။လတျတလောလေးကမှ ထောငျကလှတျလာတာပါအခုဆိုသူကဘဝကိုအကောငျးဆုံဖွတျသနျးနပေါပွီ။သူအထဲမှာနခေဲ့ရတုနျးက သူ့မိခငျမှာအမွဲနာကငျြဝမျးနညျးနခေဲ့ရတာပါ။
ခုဆိုသူက မိခငျနဲ့အတူအလုပျဝဝေိုငျးကူလုပျရငျးဘဝကိုဖွတျသနျးနပေါတယျ။သူက အလှူအတနျးတှမှောလဲရကျရောတဲ့စိတျရှိကွောငျး Mideaတဈမှာ “အမှားတဈခုလုပျမိလို့ခုလိုဖွဈရပမေယျ့ လူထဲကလူပါပဲ အလှူအတနျးတှလေဲတတျနိုငျသလောကျလုပျသှားခငျြတာပေါ့”ဆိုပွီးပွောထားတာတှရေ့ပါတယျ
အစ်စဏီကအခုသားအမိနှဈယောကျစီးပှားရေးကိုစတငျလုပျကိုငျဖွဈတဲ့အ ကွောငျးကိုလဲ ရှငျးပွထားပါသေးတယျ။ “ကြှနျတျောအမေ က ဟငျးခကျြ အရမျးကောငျးတယျ အဲဒီတော့ ကြှနျတျောတို့ သားအမိ ၂ယောကျ စီးပှားရေး လုပျမှာ ဖွဈတော့ မှာမို့လို့ မကွေီးလကျရာ ဆိုပွီး စီးပှားရေး တဈခု ကိုစလုပျခဲ့တာပါ
ကြှနျတျော အထဲ မှာတုနျးက အမေ ရဲ့ ဟငျးခကျြလကျရာ ကို အရမျးလှမျးတယျ. အမေ ဟငျးခကျြ ပို့တဲ့နဆေို့ ပို့တဲ့ဟငျးတှကေိုတဈနတေ့ညျး ကုနျအောငျစားပဈတာမြိူးရှိတယျပရိသတျတှကေ မကွေီးလကျရာ ကို အားပေးခငျြတယျဆိုရငျ မကွေီးလကျရာ fb မှာ အားပေးနိုငျပါတယျ”ဆိုတဲ့သတငျးကိုမြှဝပေေးလိုကျရပါတယျနျော။
ချစ်ရတဲ့ ပြည်သူပရိတ်သတ်တွေ ကို သူမဘယ်လောက်တန်ဖိုးထား တယ်ဆိုတာ သက်သေပြ လိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်